warkii.com » Real Madrid Way Gaajoonaysaa, Waa Inaanu Guul Ku Dabbaal-degno Khamiista
Real Madrid Way Gaajoonaysaa, Waa Inaanu Guul Ku Dabbaal-degno Khamiista
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa soo bandhigay in qorshaha kooxdiisu yahay inay Khamiista u dabbaal-degaan hanashada horyaalka waddanka Spain ee Laliga marka ay garoonka Estadio Alfredo di Stefano ku qaabilaan Villarreal.
Los Blancos ayaa horyaalka ku guuleysan doonta haddii ay ka badiso Villarreal ama Barcelona la qabto, waxaanay guushan ugu dhowaadeen libintii ay ka gaadheen Granada ciyaartii Isniinta ay dirqiga 1-2 kaga soo gaadheen.
Ramos waxa uu sheegay in aanay wali kooxdiisu waxba ku guuleysan, laakiin ay gacantooda wax walba ku jiraan, waxaanu yidhi: “Wali waxba kumaanaan guuleysanin inkasta oo ay kooxdu u gaajaysan tahay inay horyaalka hanato.
“Gacantayada ayuu ku jiraa, walina waxa hadhsan dhibco aanu xoogsan karayno waxaananu rabnaa inaanu ku guuleysano.”
Sergio Ramos waxa uu sheegay in markii horyaalku dib u bilaabmay uu mowqifkoodu ahaa inay dhamaan kulamada u hadhsan ku guuleystaan, waxaanu yidhi: “Mowqofkayagu wuxuu ahaa markii uu xili ciyaareedku dib u bilaabmayay in ciyaar kasta aanu ku guuleysano, waxaananu doonaynaa inaanu isku dayno inaanu sidaa samayno. Waxaanu qabanaynaa in ka badan wixii la nooga baahnaa si aanu horyaalka ugu guuleysano.”
Kabtan Sergio Ramos waxa uu sheegay in horyaalka LaLiga loogu guuleysto shaqo joogto ah, waxaanu yidhi: “Koobka LaLiga, waa natiijada iyo joogtaynta shaqada maalinlaha ah. Waqtigii fasaxa ayaa na siiiyey fursad aanu ku falcelin karno oo aanu ciyaar walba ugu guuleysan karno.
“Waxaanu rajaynaynaa inaanu qaab wanaagsan ugu dabbaal-degi karno hanashada horyaalka Khamiista.”